Ọ Chineke ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ Dagen na-achịkwa? - Banyere bönekonferensen Nordic mba na-akpọ mgbe ke Solna | Apg29
Ọ Chineke ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ Dagen na-achịkwa? - Banyere bönekonferensen Nordic mba na-akpọ mgbe ke Solna
M ga-esi pensive, mgbe ọ na-adị, n'ihi na ọ sweeps onwe ụkwụ gị na ihe niile m na mbụ dị ka akpọ ka ọ bụrụ na ọ "si n'aka Chineke."
The akwụkwọ akụkọ Dagens isiokwu banyere zubere bönekonferensen "Nordic oge oku" dị ka onye nkụzi Bible Lars Enarson bụ initiator.
Ọ na-egosi, site mbụ mere ka òkè ogbako - na ihe ọ bụla ikpe m chere na ndị dị otú bụ eke mkparịta ụka na Chineke - ma mgbe e mesịrị na ụbọchị, akuko zutere "zeeuere a ntakịrị" - na ha na-arịọ Chineke maka nduzi ya omume ... N'ihi na ọ bụrụ na ị na-eme ya, ha ama nwere na-agbanwe ha mkpebi.
The uwe na ifufe
Bụ turncoats, ndị kasị ama nkwusa na-now dobe nke bönekonferensen: "Nordic Rịba ama oge"? Ònye na-ege ntị - Chineke ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ Dagen?
The akwụkwọ akụkọ Dagens isiokwu:
Pastọ dachapụ nke ogbako: "Anyị nwere ike ịbụ na nke a"
Amụma nke oké iwe Chineke megide Sweden na-elekwasị anya ekpere ogbako
Enar ekpere ogbako bụ imebi
Scandinavia si Kallelsestunds ọmụma:
Solnahallen 13-15.3.2020 "Nordic mara MGBE" Nordic ekpere ogbako
Ma hey !! (Cut)
M enweghị ndabere ịja m site, m naanị ekwu na ama bụ na m dyslexia, nọdụ kasị hobbled.
Ma m nwere mpako wear: na m natara na a ga-azọpụta site na amara, mgbe ahụ, m enen, na m fọrọ nke nta ụbọchị ọ bụla kemgbe ahụ tragglat, na-agụ na-amụta n'Okwu Chineke.
N'ihi ya, ihe ọmụma m na-ejedebeghị - dika finrummens ụkpụrụ - na ụzọ kasị mma! Ma na "na" Okwu Chineke, Mmụọ Nsọ na Life School ihe dị ka a na-amalite mgbe, m na-eche ...
M mgbe nile na-aghọta ya na - ma ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ na-ele anya na - na a ozuzu aturu - dị ka e kwuru n'isiokwu - e mere site na Chineke. Na ha mkpebi n'ime ihe a tọrọ ntọala na onye bönekammarens iru ala na udo na Chineke.
Na m na-ekwu, na kemgbe e - na ekpere kaboodu - tọrọ ntọala omume ya, na-ekwesịghị ma ga-agbanwe na, dị nnọọ n'ihi na onye politicized echiche ọha na eze, na guise nke akwụkwọ akụkọ Dagen, n'ihu ọha na-egosi perennial kpam oghe ndụ na oru.
Dabere na okwu ndị a na-ezighị ezi, dị ka ndị mbụ mkpebi maka mara bönkonferensen? Mkpebi kemgbe Day nwere ike mfe derail?
Poster nke "Nordic oge oku", gụnyere abụọ nkwusa na-ugbu a na ama esịn nke ha na-ekere òkè ogbako.
Olee otú anyị ịghọta Skoglund, dọwa bara omume? Ọ Chineke ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ Dagen na-achịkwa? Ka ọ bụ ihe ọzọ ...? Ihe anyị na-atụle ugbu a niile na mbụ osụk nke sprung nke udo na Jehova?
M na-eche ...?